Nezvedu | Sichuan Ideasys nemazvo Machinery Co., Ltd.
Simba nemakemikari indasitiri
Injiniya neyemigodhi michina michina
Njanji, mota nechitima zvigadzirwa
Kuchengetedza uye Kuzorora
Sichuan Ideasys Precision Machinery Co, Ltd. ine anopfuura 2000 mita metres yenzvimbo yekugadzira, chaiyo machining ezvikamu zvakasiyana zvemishini. Iyo bhizinesi inosanganisira wakisi kurasikirwa nemazvo kukanda machine, yekuchengetedza machining, kufa kurasa machining, bhawa, chubhu uye sheet machining. Midziyo inovhara simbi isina simbi, simbi isina kupisa, kabhoni simbi, simbi yakadzika yesimbi, alloys yepamusoro tembiricha, simbi isina feri. Nemhando yepamusoro yekugadzira michina uye yekuyedza michina, yakasimba kugona kweforoma uye chigadzirwa dhizaini / kugadzirwa, kukanda kugadzirwa uye nemazvo machine.
Sichuan Ideasys Precision Machinery Co, Ltd.iri mune zvigadzirwa zvekutsvaga & kusimudzira seimwe yehunyanzvi kugadzira nekodzero dzekunze nekutengesa kunze. Main zvigadzirwa: castings, forgings, nemazvo machine zvikamu, kufa vachikanda, zvimwe zvemaziso zvikamu uye gungano zvikamu zvekunze.
Zvemabhizinesi masevhisi kune akasiyana siyana emota, fluid chemistry, zvemagetsi zvigadzirwa, zvekurapa michina, chikafu michina, petrochemical michina, mainjiniya neungano zvichingodaro. Kambani ine vangangoita makumi maviri vakagadzikana vatengi uye nharaunda, zvigadzirwa zvinonyanya kutengeswa kuNorth America, European Union, Australia uye nyika dzinopfuura makumi maviri nematunhu.
Nesimba rakasimba revanhu, tekinoroji yepamberi nemidziyo, inotungamira tekinoroji, hunyanzvi uye timu yeR & D, sevhisi yemhando yepamusoro uye maturusi eazvino manejimendi, akakwenenzverwa kuburikidza nemakore emakwikwi mumusika wepasi rose uye ave mhando yekutengesa GE, BOSCH, Voestalpine, Audi, Foster Wheeler nevamwe vazhinji vanozivikanwa vatengi vepasirese.
Tiine "kuvimbika kutanga, sevhisi kutanga" bhizinesi uzivi uye "hunyanzvi, kutsvaga kugona," bhizimusi mweya, isu nemoyo wese tinogamuchira shamwari dzepasirese dzinouya kuzobvunzana uye kutaurirana bhizinesi rekudyidzana kukura kukuru!
Mushure mekupedza kudzidza uye kudzidza, Fred akaenda kuGerman kekutanga kutora chikamu muHannover Industrial Fair muna Kubvumbi 2010, uye akadzidza zvakawanda pamusoro pezvaidikanwa nevatengi netsika dzedzimwe nyika.
Mushure mekuratidzira, akanyatsopfupikisa matambudziko akaitika mukuitika, uye akaramba achizvivandudza mune ramangwana.
Mukushanda kwekushanda, akapinda mumitambo inopfuura gumi muFrance, Germany, Poland, Thailand neUnited States, akashanyira vatengi vakasiyana munyika makumi maviri, uye akanyatsonzwisisa zvido zvemutengi wega wega uye nevanhu vemo chaizvo uye geography.
MunaNovember 2014, akagadza Honevice, kambani yekutengeserana yekune dzimwe nyika, ine pfungwa ye "Kutendeseka" uye "sevhisi" sehunyanzvi hwebhizinesi. Kune vanhu gumi muchikwata. Semaneja maneja maneja manejimendi kushanda kwekambani yese, akapa masevhisi ari nani kune izvo zvinodiwa nevatengi, uye akachengetedza bhizinesi uzivi hwekuvimbika. Mumakore mashoma apfuura, isu takaunganidza rutsigiro uye kuvimba kwevatengi vazhinji. Ndiko kutsigira kwavo kunoita kuti Honevice isvike parizvino.
Kunyangwe paive nezvipingamupinyi zvakawanda munzira, semuenzaniso, isu takanyengerwa nemutengi uye zvakatikonzera kurasikirwa kwakakomba. Asi isu hatina kukanda mapfumo pasi, takashandura mafambiro ekudzikisa kurasikirwa, uye tikashanda nesimba mune dzimwe nzvimbo kuti tigadzirise kukanganisa uku. Kukundikana ndiamai vekubudirira. Kunyangwe ichi chaive chiitiko chakashata, isu takagara tichichengeta tarisiro, tichidzidza uye muchidimbu kubva muchiitiko ichi. Ichi chiitwa chedu kuHonevice!
Pasi pekumanikidzwa kwedenda, akasimbisa Ideasys Precision Machining Fekitori, iyo inoisa kudzora kwemhando kune yakakwira nhanho. Kunyangwe bhizinesi redu rekunze rekutengeserana raita zvakanaka kwazvo mumakore mashoma apfuura, dzimwe nguva tinoshaya zvekubatsira. Semuenzaniso, mutengi ari kukurudzira zuva rekutakura kwechigadzirwa, uye mutengesi wedu haakwanise kuendesa chigadzirwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Asi ikozvino, tinogona kudzora nguva yekuendesa tiri tega. Kana iyo nguva yekuendesa yatakavimbisa kumutengi iri kuswedera, tichaita zvese zvatinogona kuti tiwane vimbiso dzese kumutengi chero zvodii!
Kunyangwe 2020 raive rakaomesesa gore kune vanhu vazhinji. Denda rakakanganisa pasirese zvakanyanya, uye makambani mazhinji akange avhara nekuda kweizvi. Nekudaro, isu tinokunda matambudziko mazhinji uye takamisa Isys. Kunyangwe shamwari dzangu dzakamubvunza kana akahwina rotari, asi haana. Isu takangosimuka ndokusvika pachinangwa apo vamwe vaishungurudzika nedenda iri. Naizvozvo, Isys akakurira munzvimbo yakaoma kudaro!
Iye zvino timu yedu ine vanhu vanopfuura makumi matatu, iyo inopa vimbiso yakasimba yehunhu kudzora uye kuendesa. Rega vatengi vaone kuti zvakanaka kusarudza isu. Isu tiri kuvandudza nekumhanya kwakanyanya kuvaka iyo yakazara yakazara fekitori. Kuvaka kwedu kwekambani tsika yekambani uye kuchengetwa kwevanhu kwave imwe yemazano edu akakosha ekuvandudza. Isu tinogara tichiisa mhando munzvimbo yekutanga uye nekumisikidza yakasimba yakazara kugona, kusanganisira gungano, kutsvagisa nekusimudzira, uye dhizaini. Chinangwa ndechekuve wepakati-kusvika-wepamusoro-kuguma kambani yekugadzira mune ramangwana, ine simba rakasimba rekugadzira, uye zvakare kuve kambani ine mamwe maitiro.
Chinangwa chenguva pfupi ndechekuwana nzvimbo yekugadzira inopfuura zviuru mazana matatu emamirimita, vashandi vanopfuura makumi mashanu uye mubhadharo unodarika mamirioni mashanu emadhora. Uye ine yakasimba yakazara kugona. Ichakura munzira yekumusoro-kumagumo ekugadzira maindasitiri senge emaindasitiri emauto, muchadenga uye ndege.
Yedu nzira yekutungamira ndeiyi: isu tinoda kuve fekitori inosarudzika ine ultra yakazara manejimendi. Gadzira nharaunda yakanaka kune wese munhu kuti ave nepfungwa yekuve pano. Iva nemidziyo yekumusoro-soro, kugona kwekugadzira uye kugona kuongorora, uye ive yakasimba dhizaini uye kugona kweR & D.
Longteng Liu Road, Longteng Maindasitiri Park, Xingguang Zhong Road, Longquan Dunhu, Chengdu, China